५६ कृषकहरूलाई हाते ट्याक्टर वितरण | Sindhu Jwala
चैत्र ११, चौतारा । चौतारा साँगाचोकगढी नगरापालिका वडा नं. ४ कुबिण्डेका ५६ कृषकहरूलाई हाते ट्याक्टर वितरण गरिएको छ । कृषिको उर्भर भूमि रहेको कुविण्डेका कृषकहरुलाई वडा नम्बर ४ ले ५० प्रतिशत अनुदानमा हातेट्याक्टर वितरण गरेको हो । मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका मेयर अमानसिं तामाङले किसानलाई हातेट्याक्टर वितरण गरेका हुन् । हातेट्याक्टर वितरण पछि प्रतिक्रिया दिंदै नगरपालिकाका मेयर तामाङले तामङले नगरपालिकाले कृषि आधुनिकीकरणमा निकै ठुलो सहयोग गरेको र कृषकलाई गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताए ।
चौतारा नगरपालिकाले नगरबासीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न किसिमका बिउ बिजन लगायतको औषधिहरू समेत अनुदानमा सहयोग गरिरहेको उनले बताए । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले यस वर्ष मात्रै नगरपालिका भित्रका १ सय ६० किसानलाई हाते ट्याक्टर बाडने तयारीमा रहेको नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए ।
हाते ट्याक्टरको प्रयोगले काम गर्न निकै सहज र छिटो हुने हुँदा निकै नै प्रभावकारी रहेको कारण हातेट्याक्टर वितरण गरिएको वडाध्यक्ष चूडामणि नेपाले बताए । कुबिण्डेमा एक घर एक हाते ट्याक्टर पु¥याउने अभियान अन्र्तगत नै हातेट्याक्टर वितरण थालिएको समेत उनले बताए ।
उनका अनुसार चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको अनुदानमा ११ वटा र वडा कार्यालयको अनुदानमा ४५ वटा गरी ५६ वटा ट्याक्टर वितरण गरिएको हो । स्थानीय सरकार भएपछि मात्रै ४ नं. वडाले १ सय ६८ वटा ट्याक्टर वितरण गरिसकेको वडाअध्उक्ष नेपालले बताए ।
स्मरण रहोस जिल्लाको दुग्ध र आलु उत्पादनको हिसाबले प्रख्यात कुबिण्डे कृषि, पशु तथा दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइ आफ्ना उत्पादन विभिन्न बजारहरूमा निर्यात समेत गरिरहेको छ ।
पहिरो पीडित १४ घरपरिवारले पाए खाद्यन्न
भिमटार बगरखेत संरक्षणका लागि कोरिडाेर निर्माण